प्रेमिकाको योजनामा पाँच लाख माग्दै धम्क्याउने प्रहरीको फन्दामा | Citizen Post News
काठमाडौं। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले अपहरण तथा हत्याको धम्की दिने दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा कैलाली टिकापुर घर भई हाल काठमाडौं बस्दै आएका २४ वर्षीय लोकेन्द्रबहादुर शाही र उनकी प्रेमिका २० वर्षीय रुवी ठाकुर रहेका छन् । सिन्धुपाल्चोकका ब्यवसायी सिताराम कार्कीलाई एसएमएस पठाएर पाँच लाख रुपैयाँ धम्क्याउँदै शाहीले माग गरेका थिए । उनले पैसा नदिए कार्कीको छोरालाई अपहररण गर्ने मात्र नभई हत्या नै गर्ने चेतावनी दिए ।
पीडित कार्की महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा टेकुको शरणमा पुगे । उनले घटनाको बेलीविस्तार सुनाउँदै प्रहरीमा उजुरी गरे । त्यसपछि अपहरण र हत्या गरिदिने भन्दै धम्क्याउने शाहीलाई खोज्न प्रहरी लाग्यो । सोही क्रममा अपराध महाशाखाबाट खटिएको टोलीले शाही र उनको प्रेमिका रुवी ठाकुरलाई समेत गौशालाबाट पक्राउ गर्न सफल भयो । अनुसन्धानका क्रममा शाहीको आफ्नी प्रेमिका रुवीको योजना मुताविक रकम माग गरेको प्रहरीलाई बयान दिए ।
रुवीले रकम माग्न किन शाहीलाई प्रयोग गरिन ? रुवी र कार्कीबीच चिनजान थियो वा थिएन ? त्यसबारेमा समेत प्रहरीले शक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकोे छ । अपराध महाशाखाले भने सिन्धुपाल्चोक घर भई बुद्धनगर बस्ने कार्कीसँग फोन र एसएमस गरेर पाँच लाख रुपैयाँ माग गरेपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरेको बताएको छ । माग गरेको रकम नदिए शाहीले ब्यवसायी कार्कीका छोरालाई गोली हान्न धम्की समेत दिएका थिए ।